ProtonMail inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweTouch ID | IPhone nhau
Mwedzi yakati wandei yapfuura, kambani Proton Technologies yakatanga chirongwa cheProtonMail chinotibvumidza kushandisa sevhisi yakachengeteka uye yakavharidzirwa iyo kusvika zvino iyo yakangotipa isu kuburikidza neayo webhusaiti. Kubva pane chishandiso ichi tinogona kutumira maemail zvakachengeteka, tichinyora ruzivo rwese kuitira kuti munzira vasakwanise kubatwa uye kubviswa nemumwe munhu kana sevhisi.
Asi isu tinogona zvakare kuseta nguva yekupedzisira yekuverenga maemail atinotumira. Kana zuva iri rasvika, maemail akaverengwa kana kwete izvi zvinodzimwa otomatiki. Asi isu tinogona zvakare kuchengetedza maemail atinotumira ne password, kuti chete iye anogamuchira iyo email ndiye anogona kuishandisa kuverenga maemail atinovatumira iwo.
Iko kunyorera kwakauya kumusika nenhamba huru yezvinhu zvitsva kubvumidza vese vashandisi vewebhu webhu, uye vatengi vatsva vakasvika mushure mekuburitswa kweshanduro iyi yeIOS uye Android, chengetedza hurukuro dzako dzese kuburikidza neemail yakachengetedzwa, asi yakashaiwa dzimwe sarudzo idzo vamwe vashandisi vaiona dzakakosha, sekudzivirirwa kwechikumbiro neTouch ID yeminwe yekunzwa kana kuti maemail ane mifananidzo yakasungirirwa anozotakurirwa otomatiki kuitira kuti sevhisi iite senge inotumira materegiramu panzvimbo peemail .
Chii chitsva mushanduro 1.2.3 yeProtonMail
Bata ID rutsigiro
Otomatiki ichivharira application kana isu tisiri kuishandisa kwechinguva.
Iwo maemail atinogamuchira anotakura iwo mifananidzo otomatiki.
Vashandisi vane yakabhadharwa Plus account vanogona kugadzirisa uye kuwedzera zvigadziriswe masiginecha.
Vashandisi vatsva vanogona kuratidza hunhu hwavo kuburikidza neSMS yakatumirwa neshumiro.
Rutsigiro rutsva rwekusunga mbudzi kubva kuICloud, Dropbox, Google Drive ...
ProtonMail - Yakanyorwa Tsambavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » ProtonMail inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweTouch ID